🥇 ▷ Apple Kordhinta dekadaada USB-C ee badan oo leh 4K qaraar 60Hz iyo HDR ✅
Apple Kordhinta dekadaada USB-C ee badan oo leh 4K qaraar 60Hz iyo HDR
Iyada oo la adeegsanayo barnaamijka ‘IP Pro 2018’ fursado balaaran oo kala duwan ayaa loo furay mahadcelinta dekada USB-C, oo oggol iskuxiro dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka iyo qalabka dusha sare laga bilaabo unugyada keydka tooska ah ilaa kormeerayaasha, batoonnada iyo jiirka.
Si kastaba ha noqotee, adaweeyne ama xarun ayaa looga baahan yahay in la isticmaalo inta badan alaabada. Cupertino waxay bixisaa dhowr ka mid ah iyadoo kuxiran baahiyaha adeegsadaha, mid ahaaneed USB-C si AV multiport dongle.
HDMI, nooca USB A iyo deked dejinta
Aaladda loo yaqaan ‘IP Pro’ waa mid ka mid ah aaladaha yar ee ka faa’iideysan kara xalka 4K ee 60Hz oo leh qalab-adaweeygan
Adaparkani wuxuu siinayaa fursad ay ku xirmaan jiilka saddexaad ee iPad Pro ama MacBook oo leh dekada USB-C loo yaqaan ‘HDMI jack’ si loogu gudbiyo seenyaalaha kormeeraha ama telefishanka. Apple hadda waxay cusbooneysiisay (nambarka nooca A2119) hirgelinta horumar la taaban karo.
Qalabka cusub ee USB-C digital AV dongle wuxuu ku darayaa taageerada HDMI 2.0 (kii hore wuxuu ahaa 1.4b). Sida 9to5Mac tilmaamay, tani waxay u oggolaaneysaa qaraarka gudaha 4K fiidiyowga 3840 x 2160 iyo 60Hz. Intaas waxaa sii dheer, waa mid la jaan qaadaya HDR10 iyo Dolby Vision.
Waxyaabaha Apple soo waafaqay waxay kala yihiin:
2017 15-inch MacBook Pro ama wixii ka dambeeya
iMac Retina 2017 ama wixii ka dambeeya
Si aan ugu raaxeysano fiidiyowga 4K ee 60Hz waxaan u baahan nahay inaan helno aaladaha ugu ugu casrisan ee suurtagalka ah. Arrinta IP Pro, iOS 12.4, iyo Mac ah, macOS Mojave 10.14.6. Qiimaha Dongle waa 79 euro oo kuyaal Apple Store
La wadaag Apple kor u qaadistaaga dekedaha badan ee USB-C dongle oo leh xalka 4K ee 60Hz iyo HDR